Zvigadzirwa & Mifananidzo
Skid steer anotakura makwara
Bhaudhi pane mhando
Clip pane mhando
Chain pane mhando
Special rabha mapedhi
Bhenefiti yevanokambaira vanochera
Basa guru re "track" nderekuwedzera nzvimbo yekubatana uye kudzikisa kumanikidza pasi, kuitira kuti igone kushanda zvakanaka pavhu rakapfava; iro basa re "grouser" rinonyanya kuwedzera kukakavara neinosangana nzvimbo uye kufambisa kukwira mashandiro. Kr ...
Ikozvino mamiriro ekuvaka michina yakasanganiswa yekukambaira kugadzira
Mamiriro ekushanda evacherekedzi, mabhurldoz, makara anokambaira uye mimwe michina mumishini yekuvaka yakaoma, kunyanya avo vanokambaira vari munzira yekufamba pabasa vanofanirwa kumira kwakanyanya kusagadzikana uye kukanganisa. Kuti usangane neyakagadziriswa michina yeanokambaira, zvinodikanwa ...
Kuongorora zviyero zvemasiki ekurapa
1. Chiremba chekudzivirira maski Inoenderana neiyo GB19083-2003 "Zvinodiwa zvehunyanzvi zveMedical Protective Masks" akajairwa. Zviratidzo zvehunyanzvi zvakakosha zvinosanganisira asiri-oiri chidimbu chesafa yekunyatsoshanda uye kushomeka kwemweya: (1) Kushanda kwekutsvaira: Pasi pemamiriro emhepo flo ...
Isu tanga tiri muBAUMA Shanghai 2018
Tichaenda intermat 2018 pa 04/2018
Tichaenda kuIntermat 2018 （International Exhibition Yekuvaka Uye Zvivakwa） pa 04/2018, tinogamuchirwa kutishanyira！ Booth No. MareHall a D 071 Date: 2018.04.23-04.28
Gator Track Yezvakatipoteredza Midziyo